မြန်မာပြည်နည်းပညာနဲ့ စိတ်ပျက်စရာ အနာဂါတ်အလားအလာများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » မြန်မာပြည်နည်းပညာနဲ့ စိတ်ပျက်စရာ အနာဂါတ်အလားအလာများ
မြန်မာပြည်နည်းပညာနဲ့ စိတ်ပျက်စရာ အနာဂါတ်အလားအလာများ
Posted by naywoon ni on Jan 15, 2013 in Drama, Essays.., My Dear Diary | 18 comments
တစ်ရက်က ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့အဆက်အသွယ်ရလို့ အင်တာနက်အကြောင်းပြောမိရာက သူဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာသိလိုက်လို့ သူ့အကောင့်တောင်းပြီး ဂျီတော့ပေါ်မှာ စကားပြောဖို့ ခေါ်လိုက်ပါတယ်….။ ကျောင်းတုန်းကသူငယ်ချင်းဆိုတာက 88 ကျောင်းပိတ်တော့ကွဲကွာသွားတဲ့သူငယ်ချင်း နောက်တွေ့ဖြစ်တော့လည်းခဏတစ်ဖြုတ်ရယ်…။ စကားစမြည်ဆိုလို့ အားရပါးရ ပြောဖြစ်ချိန်ရယ်နဲတယ်…။ သူကလည်းသူ့အလုပ်နဲ့ ကိုယ်ကလည်းကိုယ့်ကိစ္စနဲ့ကိုဆိုတော့ တွေ့ရရင်လည်းခဏတဖြုတ် အေးအေးဆေးဆေးရယ်လို့မရှိခဲ့တာ….။ ဒါနဲ့ ခုတော့ဂျီတော့မှာအားရပါးရစကားပြောရပြီဟဲ့လို့ စိတ်ကူးလိုက်ပါတယ် …။ သတောင့်သားက တော်တော်နဲ့ ဂျီတော့ကနေအက်ထားတာ လက်မခံပြန်ဘူး….။ သေချာအောင်ဖုန်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ သူ့အကောင့်ပြန်မေးရင်း မင်းအင်တာနက်သုံးနေတာကြာပြီလားလို့ ပြန်မေးရသေးတယ်…။ မကြာသေးဘူးတဲ့ သူကဖေ့စ်ဘွတ်ပဲ သုံးတာတဲ့ ဟိုက်ရော…………။ အဲဒါနဲ့ဖုန်းထဲကနေဆဲလိုက်ရတယ်….။ နင့် xxxကလွှား လို့ ဟုတ်တယ် အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဖေ့စ်ဘွတ်တစ်ခုထဲရှိတာကျနေတာပဲ….။ ဟုတ်တယ်…။ ဒါနဲ့ဂျီတော့ကိုလာခဲ့ အဲဒိရောက်မှ ဆက်ပြီး ဆဲမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်…။ ညရောက်တော့ ဂျီတော့ပေါ်ကိုတက်လာပါတယ်…။ အဲဒိတော့မှာ သူကြည့်သင့်ဝင်သင့်တဲ့လင့်တွေ ပေးလိုက်တော့ ဘယ်လိုဖွင့်ရမှာလဲတဲ့……။ ခက်ဖူးလား….။ အဲဒိတော့ ငယ်သူငယ်ချင်းမို့ ပြောလိုက်ပါတယ် လင့်ပေါ် မျှားတင်ပြီး ကလစ်လိုက်လို့…….။ ခက်တာကအဲဒါတွေပဲ….။ အဲနောက် တော်တော်နဲ့စကားပြန်တက်မလာပြန်ဘူး….။ ဘာလုပ်နေလဲ ဟ လို့သုံးခါလောက်ရိုက်ပြောမှ “fb use nay tar” တဲ့….။ မိုးမွှန်အောင် ကိုင်တုပ်လိုက်ပါတယ်…။ ငယ်သူငယ်ချင်းဆိုတော့ အရင်ကတည်းကပြောမနာဆိုမနာ လည်ပင်းဖက်ပေါင်းလာတဲ့ကောင် …။ နေ၀န်းနီရဲ့ မဆုံးတဲ့သီချင်းမှာထည့်ရေးဖူးတယ် …။ ဘကြီးသန်းတဲ့…။ အဲဒိကောင်….။ “ မင်း ဖေ့စ်ဘွတ် သုံးနေတယ်ဆိုတာက သူများစာမျက်နှာတွေသွား တင်ထားတဲ့အရုပ်လေးကြည့် အောက်က ရေးထားတာလေးလိုက်ဖတ် ကြိုက်ရင် like လေး နှိပ်လိုက် ဒါပဲမဟုတ်လား ဒီထက်ပိုပြီးမင်းဘာသိသေးလဲ” ဆိုတော့ “ဟင့်အင်း” တဲ့ ကောင်းကြသေးရဲ့လား …။ အရပ်ကတို့ရေ………။ ကိုယ့်ရှေ့မှာနည်းပညာ တော့ရှိနေပါရဲ့ ဘယ်လို အကျိုးရှိအောင်သုံးရမှန်းမသိဘူး…။ အင်တာနက် ဆိုတာတော့ချိတ်ထားပါရဲ့ တစ်နေ့တစ်နေ့ ဂျီတော့နဲ့အချိန်ကုန် …။ ဂျီမေးလ်တောင်မဖွင့်တတ်တဲ့သူရှိတယ်…။ နေ၀န်းနီအပိုမပြောဘူး …။ အဲဒိတော့ဒီလိုတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲဆိုတာ ခြေရာခံလိုက်ကြည့်လိုက်တော့ အဓိက တရားခံက အဲဒိနည်းပညာသင်တန်းတွေ ဖြစ်နေတယ်….။ ကွန်ပြူတာသင်တန်းတွေက တတ်သင့်တတ်အပ်တာ ကုန်အောင်သင်မပေးလိုက်တာရယ် သင်မဲ့သူတွေစိတ်ဝင်စားလာအောင်အင်တာနက်ပါတွဲသင်ပေးမယ်ဆိုပြီး ဆွဲဆောင်လိုက်တာရယ် အဲဒိကနေဒီပြဿနာကရောက်လာတာပဲ…။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သင်တန်းကဆင်းလာတဲ့သူတွေမေးကြည့်ဖြစ်လို့ပါ….။ သူတို့သင်တန်းက မြန်မာစာဖွန့်တွေ လက်ကွက်တွေသင်တဲ့အခါမှာ အသုံးများတဲ့ ၀င်း ဖွန့်ကိုပဲ အဓိက သင်ပါတယ်…။ ဇော်ဂျီဆိုတာမသိဘူး …။ ယူနီကုတ် ဆိုရင် ဘာလဲလို့တောင်ပြန်မေးတဲ့သူရှိသေးတယ်…။ သင်တန်းက သင်ပေးလိုက်တဲ့ မြန်မာစာလက်ကွက်က အင်တာနက်ပေါ်မှာသုံးမရဘူး…။ အင်္ဂလိပ်စာလက်ကွက် ကဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်အသုံးဝင်တယ်…။ ဒီတော့ အလွယ်တစ်ကူ သုံးလို့ရတဲ့ (ဂျီတော့နဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့် ကို သင်တန်းကလုပ်ပေးလိုက်တာများတယ်…။ သူတို့ကိုဘယ်လိုလုပ်ရသလဲနောက်အသစ်တစ်ခုလုပ်ခိုင်းမသိတော့ဘူး မလုပ်တတ်ဘူး ဒါဟာသူတို့ အတွက်အခက်အခဲကြီးတစ်ခု ) ဂျီတော့နဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ မြန်မာစကားသံအတိုင်း အင်္ဂလိပ်စားလုံးနဲ့ လှိုင်လှိုင်ကြီးရိုက်သုံးနေတော့တာပဲ….။ “nay kaung la” “ sleep chin p” တဲ့ နေကောင်းလားဆိုတာကတော့ဟုတ်ပါပြီ…။ ဘာတဲ့ sleep ချင်ပြီ ။ ခေါင်းမွှေးဖြူအောင်စဉ်းစားလိုက်ရတယ်…။ အသံထွက်အတိုင်း “စလိ(ပ်)ချင်ပြီ” ဆိုတော့ကာ ဘာကို စလိ(ပ်)ချင်တာလဲ …။ အော် …. အိပ်ချင်ပြီလို့ပြောတာ သေဟဲ့နန္ဒိယ…။ စောစောကလည်း “fb use nay tar” ဆိုတော့ မြန်မာလိုအသံထွက်အတိုင်းလဲသူရို့မသုံးကြပါလား ပေါ့လေ…….။ ကောင်းလိုက်တာ စိတ်ပျက်ဖို့….။ ၀က်ဆိုဒ်တော်တော်များများမှာ အဲဒိလို မြန်းဂလိ (ဘားဂလိလို့လည်းသုံးတယ်) နဲ့ ရေးတာလက်မခံပါဘူး…။ အားလုံးလောက်ပါပဲ…။ အဲဒိတော့ သူတို့အနေနဲ့ဘယ်ဝက်ဆိုဒ်ထဲမှာမှ အံဝင်ဂွင်ကျနေမရပါဘူး…။ သုံးလို့ရတဲ့ ဂျီတော့နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာပဲ နေကြတာများတယ်..။ အဲဒိတော့ အင်တာနက်ဆိုင်လာပြီး ထိုင်နေတဲ့သူတွေကိုလည်း သိပ်ပြီးထင်ထားလို့မရဘူး…။ ဖုန်းနဲ့သုံးနေသူတွေကော ပိုတောင်ဆိုးသေးတယ်…။ တစ်ခါက နေ၀န်းနီထက်တော့ငယ်ပါတယ်…။ ဒါပေမဲ့လေ့လာမှု ရှိတယ် ။ နေ၀န်းနီတုန်းက သူ့ဆီက ပြန်လေ့လာရတာတွေရှိဖူးတယ်…။ သူနဲ့တစ်ခါတစ်လေ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ ဆုံတော့ ရယ်စရာမောစရာအနေနဲ့ ပြောသွားတာလေးဖောက်သည်ချလိုက်ချင်သေးရဲ့ …..။ အဲဒိလိုလူတွေ ဂဇက်တက်ထဲမှာများရှိနေရင်တော့စောင်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူး …။တည့်တည့်ပြောတယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်ပါ…။ ဆဲလည်းမတတ်နိုင်ဘူး ..။ပြောစရာရှိတာတော့ စကားကုန်အောင်ပြောလိုက်ရမှ………..။ သူနဲ့ အင်တာနက်ဆိုင်ထိုင်ရင်ရင်းနှီးခဲ့တာပါ…။ နေ၀န်းနီထက်တော့ ငယ်ပါတယ်…။ အဲဒါနဲ့လိုင်းမကောင်းတဲ့တစ်ရက် လ္ဘက်ရည်ဆိုင်အတူထိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုပါတော့ ….။ အဲဒိမှာ စကားစပ်မိရင်း စောစောက ကိစ္စ ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်လေ………။ အဲဒိမှာ သူပြောတာက
“ မြန်မာစာ အသံထွက်ကို အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်ပြောတာက အင်တာနက်ပေါ်ကာစ က မြန်မာစာလုံး ဖောင့်ကို သုံးမရခင်က ရှိခဲ့တယ် ….။ ဒါပေမဲ့ ခုဟာက ကိုယ့်ဘာသာစကားရှိပြီပဲဗျာ ဘာလို့ အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေနဲ့ ဇွတ်အသံထွက် ရအောင်ရျုက်နေကြမလဲ…။ ဒါပေမဲ့ ဖြစ်ပုံက ဒီလိုဗျ…။ ကျုပ်တို့လူမျိုးက ဘယ်တုန်းက ကိုယ့်ဘာသာစကား ကိုအထင်ကြီးတဲ့သူ ဘယ်နျစ်ယောက်ရှိလို့လဲ…..။ အင်္ဂလိပ်စာ လုံးတွေနဲ့ရိုက်ထားမှ အထင်ကြီးချင်ကြတာ….။ အင်္ဂလိပ်စာလုံးနဲ့ မရိုက်ရဘူး မပြောပါဘူးဗျာ ….။ ရိုက်ပါ …။ အင်္ဂလိပ်စာကို ဌာန်းကရိုင်းကျကျ သဒ္ဒါနည်းမှန်မှန် ရိုက်ပါ …..။ အားပေးပါတယ်…။ ကိုယ်မတတ်ကျွမ်းပေမဲ့ လိုက်ပြီးဖတ်နိုင်သလောက် ဖတ်မှာပဲ…။နားမလည်ရင်ပြန်မေးမှာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား ။ ခုတော့ အဲဒိလိုမဟုတ်ဘူးဗျ… ကိုနေ၀န်းနီရ….။ မြန်မာအသံထွက်စစ်စစ်နဲ့ စာလုံးပေါင်းရိုက်သလားဆိုတော့လည်းမရိုက်တတ်ဘူး…။ တွေ့ချင်တယ်ဆိုတာကို “ see chin tal” တဲ့ဗျာ ဘာဆီးချင်တာလဲ …။ ဆီးသွားချင်တာလား မေးတော့ မိုက်ရိုင်းတယ်ဖြစ်ကုန်ရော……..။ တစ်ချို့ရှိသေးတယ်…။ ကိုယ်တင် စကားပျက်နဲ့ရိုက်တာမဟုတ်ဘူး ….။ ကိုယ်နဲ့ပြောနေတဲ့သူကိုလည်း သူခိုးဖော်ညှိသေးတယ်…။ သူ့ဘက်က မြန်မာဖွန်းမမြင်ရဘူးတဲ့…။ သူသုံးနေတဲ့နေရာက မြန်မာပြည်ထဲက အင်တာနက်ဆိုင်မှာ ….။ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား …။ တစ်ရက်က အမြင်ကပ်ကပ်နဲ့မြန်မာဖောင့် မမြင်ရပါဘူးဆိုတဲ့ အကောင့် မြန်မာ စာလုံးနဲ့ပဲ ငါနဲ့ ကိုင်တုပ်လိုက်တယ်…။”
တဲ့… ကဲ မှတ်ကရော……။
“နောက်ရှိသေးတယ် ကိုနေ၀န်းနီရဲ့ ခင်ဗျားက ဖေ့စ်ဘွတ်ကို သိပ်သုံးတာမဟုတ်ဘူး ဒါပေမဲ့ သူ့အကြောင်းတော်တော်များများသိပြီးလုပ်တတ်တယ်..။ ထားပါတော့ သုံးတတ်သလောက်နဲ့ တွင်ကျယ်အောင်သုံးနိုင်တယ် ….။ ဟိုဟိုဒီဒီ ကလိနိုင်တယ် ဒါကပြဿနာမရှိသေးဘူး ….။ တစ်ရက်ကဗျာ အင်တာနက်ဆိုင်မှာကောင်မလေးတစ်ယောက် သူ့ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာဖွင့်ပြီး ထိုင်ကြည့်နေတယ် ဘာမှလည်းမလုပ်ဘူး ဘာမှလည်းမရှိဘူး…။ အဲ တစ်နာရီလောက်ကြာတော့မှပြန်ထသွားတယ်….။ ဖေ့စ်ဘွတ်ထဲမှာရှိတယ်ပြောလို့လာကြည့်တာ ဘာမှလည်းမတွေ့ပါဘူးတဲ့ ပြောသွားသေးတယ်….။ အဲဒါမျိုးတွေလည်းတွေ့တတ်သေးရဲ့”
ကောင်းကြသေးရဲ့လားအရပ်ကတို့ရဲ့ လို့သာအော်လိုက်ရ …….ဟင်းဟင်း
အပိုင်း(၂)ကို ……….နေ၀န်းနီနှင့် မဟာဖေ့စဘုတ်တော်ကြီး
အဲ့လိုမျိုး အဖြစ်မျိုးတွေ အများကြီးပဲဗျ
လူငယ်တွေ ပြုပြင်စရာတွေပေါ့ဗျာ (ဆရာဂျီးလေသံနဲ့ ဘယ်တော့ အရိုက်ခံရမလဲမသိဘူး :mrgreen )
ဖေ့စ်ဘုတ်.. ဂျီတော့မသုံးတတ်တဲ့.. ကျုပ်များစောင်းပြောနေသလား. ကိုရင်နေ..။
ညွှန်းရမယ်ဆိုရင်တော့ ဦးဦးဘဲဥ၊ဦးဦးပေ၊ ဦးဦးဆြာ၊ဦးဦးဂီ့တို့ဖြစ်ပါတယ်
ဒီဆရာကြီးတွေက ဂျီတော့ ဖေ့ဘွတ်အရမ်းကျွမ်းတာ
ဟဲဟဲ ခင်လို့စတာနော် ဦးဦးလေးယောက် ချိတ်ချိုးရဝူး
ဖေ့စ်ဘွတ်ကို သတင်းတွေဖတ်ဖို့.. ရှယ်ဖို့.. သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်ရဖို့ အတွက်သုံးပါတယ်
ခုနောက်ပိုင်း ဂျီတော့တောင် သိပ်မသုံးဖြစ်တော့ဘူး မေးလ်ပို့စရာရှိမှ ဂျီမေးလ်ဖွင့်မိတယ်
ချက်တင်းက ရှင်မွေးလွန်းကို လူပျိုလှည့်တာ အောင်မြင်ပြီးကတည်းက မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး.. ဟီး
ဂေဇက်မှာပို့စ်တွေလိုက်ဖတ်၊ ကွန်မင့်တွေပေး၊ ပို့စ်တွေရေးတာကလည်း အချိန်တော်တော်ပေးရသားဗျ
ဖေ့စ်ဘွတ် ကို ဘာလို့ မျက်နှာစာအုပ်လို့မသုံးတာလဲ?
ဖုန်းကနေ ရုံးကစက်ကနေ သုံးနေတာဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ် မြန်မာစာရှိပါ့မလဲ
“ see chin tal” “nay kaung la” “ sleep chin p” “fb use nay tar” ဆိုတာတွေတော့
ဟိုမရောက်ဒီမရောက် “အောက်ကလိအာစကား”တွေမို့ ကျုပ်လည်းသောက်မြင်ကပ်ပါဂျောင်းးးး
ကျွန်တော် အမြင်လေး ပြောမယ်နော်……….
အခုခေတ်က တနည်းအားဖြင့် quality ထက် quantity ကို ပိုပီး ဦးစားပေးနေတယ်လို့ပြောရင် မှားမယ်မထင်ပါဖူးဗျာ………..
အဲ့ဒီတော့ ထွက်လာတဲ့ သင်တန်းသားများ ကွာလတီ မမှီတာကို အံသြတော့ မဖြစ်ပါဖူး…..
နောက်တခုက Basic သင်တန်း တနည်းအားဖြင့် အင်တာနက် အခြေခံ ကွန်ပျူတာ အခြေခံ….
အဲ့လို သင်တန်းတွေကို တက်တဲ့သူအား အခု အချိန်မှာ များသောအားဖြင့် အသက် နှစ်ပိုင်း ကွဲပါတယ်….
တခုက လူငယ်ပိုင်းပါ…. ၁၃ မှ ၁၈
တခုက လူကြီးပိုင်းပါ…. ၃၀ မှ ၅၀ (ကြားထဲက အပိုင်းတွေက အခြေခံမတက်ကြဖူးကွယ်)
နေ၀န်းနီ အဲ့ အသက်အပိုင်းအခြားထဲက လူကြီးပိုင်းမှာ တခါမှ အင်တာနက် မသုံးဖူးတဲ့သူ တခါမှ ကွန်ပျူတာ မကိုင်ဖူးသူ တွေကို သင်ကြည့်ပါလားဟင်…..
ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ်တွေ့သင်ဖူးပါတယ်…..
သင်တဲ့သူတွေဘက်ကလည်း တချို့ က တကယ်သင်ပေးချင်ပါတယ်….
ဒါပေမယ့် သင်တန်းက ကိုယ်ပိုင်တာမဟုတ်ဖူးလေ…. အချိန်ကလည်း ရှိသေးတယ် ငွေကလည်း ရှိသေးတယ်….
ကျွန်တော်တို့အခြေခံတက်တုန်းကဆို အစောကြီးလာ ကလိ၊ဖတ်၊မေး ပြသာနာဖြစ် မသိချင်ယောင်ဆောင်…..
အဲ့ဂလိုနဲ့ တက်လာတာ… တချို့ များကြတော့ ဖတ်စာထဲကဟာတောင် အကုန် မလုပ်ကြည့်ကြဖူး…..
ဆိုတော့ကား ဖေ့ဘွက် မကလို့မည်သည့်နည်းပညာပင် ဖြစ်စေ…..
တက်ခြင်း မတက်ခြင်းကား သင်တန်းနဲ့ လည်း အပြည့်အ၀ မသက်ဆိုင်ပါ…..
ဒါပေမယ့် သင်တန်းသားရဲ့ သင်လိုခြင်းအပေါ်တော့ အပြည့်အ၀ သက်ဆိုင်ပါတယ်……
နေ၀န်းနီစာဖတ်ရင်း မျက်စိထဲမြင်လာမိတာက အာဖရိကက ကလေးလေးတွေ စာသင်နေတဲ့ပုံပါပဲ…..
အဲ့ပုံကို ကျူရှင် အပြည့်မရလို့ငိုနေတဲ့ ကလေးပုံလေးနဲ့တွဲပြထားတာလေးကို ပြေးမြင်မိပါတယ်…..
တစ်ဦးတယောက်ခြင်းရဲ့ သင်လိုစိတ်သာ မူတည်တယ်လို့ယူဆလျက်
ကိုယ်ဘယ်လောက်တော်တယ် တတ်တယ် ဆိုတာက အကြောင်းမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်မှာ တော်ချင် တတ်ချင်စိတ် ဘယ်လောက်ရှိသလဲ ဆိုတာကသာ အကြောင်း
အဲဒိစာအုပ်လေး ဒေါင်ပြီး ဖတ်ကြည့်(ကြ)ပါ ကိုတိမ်မည်းရေ…..။
အဲဒိ လင့်ကတော့ အခုလောလောဆယ် နေ၀န်းနီ လေ့လာနေတဲ့ နည်းပညာ စာအုပ်များရှိသောလင့်ဖြစ်ပါတယ် သူကြီး စာအုပ်တစ်အုပ်ချင်းတင်ပေးတာထက် ၀က်ပေ့ခ်ျ တစ်ခုလုံးကိုလင့်ပေးလိုက်တာက ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်….။
မှာလည်း စာအုပ်ကောင်းတွေရှိပါသေး တယ် …။
gtalk မှာကောင်မလေး ငယ်သေးတယ်အသက်က၁၄ တဲ့သူပြောတဲ့ မြန်းဂလိတွေ
ဘာပြောမှန်းလဲ မသိဘူး။ဖုန်းဆိုရင် အတိုကောက် ph ပဲပေါ့သူကမဟုတ်ဘူး pho တဲ့
နားလည်မှုတွေအရမ်းလွယ်ကုန်တယ် နောက်ဆုံးအဆိုးကတော့ ဖုန်းဆက်မယ်နော် ပြောတာအဆိုးဆုံးပါပဲ။ကျွန်တော် တော်တော်ကြောင်သွားတယ် သူပြောတာက
“pho sex mal lay” ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲ။ဒီကလေးဘာတွေလာပြောနေတာလဲပေါ့။သေချာစဉ်းစားလိုက်တော့မှရှင်းတော့တယ်။
အင်း.. Green Rose လည်း သိပ်များများမသုံးတတ်ပါဘူး….. အဲဒီ့ Myanglish လိုရိုက်တာတွေကိုတော့ မကြိုက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တော်တော်များများသုံနေကြတော့ တစ်ခါတစ်လေဆိုရင် Myanglish မှန်းတောင်မေ့မေ့နေသလိုပါပဲ။ ကိုယ်တိုင်တော့ မြန်မာလိုဖြင့်မြန်မာလို၊ အင်္ဂလိပ်လိုဖြင့် အင်္ဂလိပ်လို တတ်နိုင်သရွေ့သုံးပါတယ်။ တော်ကြာ နဂို မတော်ရတဲ့ကြားထဲ ပိုညံ့သွားမှာစိုးလို့လေ…
ကလေးတွေ အင်တာနက် သုံးကြတယ် ….
လူငယ်တွေ အင်တာနက် သုံးကြတယ် …
(တကယ်က ချက်တာ၊ ကြူတာ၊ ဂိမ်းတော့တာ)
လူလတ်ပိုင်းတွေ အင်တာနက် သုံးကြတယ် …
(တကယ်က သူတို့လည်း ကြူတာပဲ)
လူကြီးပိုင်းတွေ အင်တာနက် သုံးကြတယ် …
အင်တာနက် ပေါ်မှာ ..
အခြား အခြား ကိုယ့်အတွက် ပညာပွားစရာတွေ
အများကြီး အများကြီး .. ဖရီး .. ဖရီး …..
““ ဟင်းး ဟင်းး ””
အဲဒီလို ဘာသာပျက်တွေ ရေးလာရတာ ကျနော့်စိတ်ထင် အင်္ဂလိပ်စာ အားနည်းလို့ ထင်ပါတယ်ဗျာ။ မြန်မာစာ ကျတော့လည်း လက်ကွက်က မကျင့်နိုင်။ အင်္ဂလိပ်လို ရေးရမယ် ဆိုတော့လည်း simple English တောင်ရေးဖို့ အခက်အခဲ ရှိလာတော့ အဲဒီလို ဟိုမရောက် ဒီမရောက် ရေးကြတော့တာပဲ။ ကောင်းကောင်းသင်ထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်လို ရေးနိုင်သူတွေကို မဆိုလိုပါ။ အဲဒီလို လူတွေကလည်း လက်ရှိ မြန်မာလူငယ်ထဲမှာ ရာခိုင်နှုန်း နည်းနေသလားပဲ။
ကျနော် ကွန်ပျူတာကို စကိုင်ဘူးတာ ၁၉၉၈ ခန့်  ကပါ ။ပြီးတော့ ပြတ်သွားတာ နှစ်ပေါင်း
ဆယ်စုနှစ်ကျော် မကပါပဲ ။ ဂဇက်ကိုဝင်မှ ပြန်ကိုင်ဖြစ်တာဆိုတော့
တော်တော် လေး အဆက်ပြတ်ပြီး ယောင်ချာချာဖြစ်ရပါသေးတယ် ….။
အချိန်သာရမယ်ဆိုရင် အွန်လိုင်းကို အကျိုးရှိအောင် သုံးစရာတွေ အများကြီးပါ ။
ဟို … မြင်းဂလိတ် လား မြန်းဂလိရှ် လား အဲဒါကြီးကတော့ ကျနော်လည်း မဖတ်တတ်ဘူး ..။
သဂျီးဆီက ခိုးငွေ့သူငယ်ဓာတ်ပုံတွက် ရပြီးပြီလား။
..ကျမလည်းအဲဒီ မြန်းဂလစ်ရ်ှတွေ နားမလည်ဘူး။သုံးလည်း မသုံးဘူး။
ကိုယ်နဲ့ နီးစပ်သူတွေတော့ မသုံးပါနဲ့၊ရှိစုမဲ့စု ခေါင်းထဲက အင်္ဂလိပ်စာတွေ ပျောက်ကုန်လိမ့်မယ်၊
တကယ်တမ်း ပီပီပြင်ပြင်ပြောဖို့ရေးဖို့ အကြောင်းပေါ်လာတဲ့အခါ အဲဒီ အပျက်တွေခံနေလိမ့်မယ်လို့….ပြောဖြစ်ပါတယ်။
အပိုင်း နှစ် ကို စိတ်ဝင်စားစွာ စောင့်မျှော်နေပါတယ်နော်……
မြန်မာစာရိုက် တော်တဲ. သူတွေရှိကြပါတယ်
လက် ၁၀ ချောင်းကိုလဲ အကုန်သုံး ကြပါတယ်..
တစ်ချောင်းထိုး မဟုတ်ပါဘူး တော်ပါပေတယ်..
ကျနော်ကတော. မြန်မာလို ရိုက်မတော်ဘူးဗျာ..
ဒါကြောင်. တစ်ခါ တစ်ခါ အိပ်ချင်နေရင်..
အလွယ် 8 chin p လို.ရိုက်လိုက်တယ်ဗျာ..
တိုင်းတပါးက အင်တာနက်ဆိုင်တွေ က ကွန်ပြူတာတွေမှာ မြန်မာစာလုံးလဲမရှိ ဘူးဗျာ…